UApple uthenga 'indoda enkulu ekhampasini' amaXwebhu malunga neBhola yeBhola yeBhasikithi kaMenzi kaMenzi | IPhone iindaba
UApple uthenga 'uMntu oMkhulu kwiCampus' malunga nembalasane yomnyazi webasketball
Ihlobo lisondela kwaye nexesha likwasondela apho siya kuthi sikwazi ukubanakho ukonwabela ixesha elikhululekileyo. Kutheni ungonwabeli ikhathalogu yeaudiyo yeqonga levidiyo? Namhlanje uApple usandula ukupapasha ukuthengwa kwexwebhu elitsha leApple TV +, kwaye kukuba amaxwebhu aya esiba ngawona athandwayo. Kungekudala siza kuba nakho ukubona Indoda eNkulu kwiCampus, ibali elitsha le-Apple TV + elijolise kwinkwenkwezi yeNBA Makur Maker.
Njengoko sikuxelela, I-Apple iqinisekisile ukuthengwa kwe Indoda enkulu ekhampasini uthotho lwamaxwebhu olubhekiswe nguSeth Gordon osizisela ibali loMenzi kaMakur. Kulabo abangamaziyo, uMakur Maker uyinkwenkwezi ye-NBA owathi ngo-2020 wagqiba kwelokuba adlale ibhola yomnyazi ukuxhasa utshintsho olwenzeka kubuhlanga kunyaka ophelileyo.
"Indoda Enkulu ekhampasini" libali lomzuzu wembali eMelika uxelelwe ngombono womdlali omncinci onamandla okwenza utshintsho. Kwi-2020, unyaka ophawulwe ngoxinzelelo lwasentlalweni, uvakalelo lwebhasikithi, i-NBA hiatus kunye nokukhetha okuphezulu kwe-NCAA, UMenzi kaMakur, uthathe isigqibo sokudlala ibhola yomnyazi kwiYunivesithi yaseWoward Ukuxhasa iikholeji zaMnyama zaMandulo kunye neeDyunivesithi endaweni yokujoyina enye yeenkqubo ezininzi ezikumgangatho ophezulu ezikunika ikhondo lomsebenzi opheleleyo. Ukulinganisa uxinzelelo olungaqhelekanga kokubini ngaphandle nangaphandle kwebala, kwaye ngamehlo esizwe ejonge kuyo yonke into ayenzayo, uhambo lukaMenzi-ukusuka ekubalekeni edlakazwe yimfazwe eSouth Sudan njengomntwana ukuya kumbutho awubonileyo namhlanje - kubeke ubunzima kwezopolitiko zaseMelika. ngeli xesha lingazange libonwe.
Njengoko ubona, luxwebhu lweenjongo, iApple ilandela umkhondo ophawulwe kumaxesha angaphambili okuzibophelela kwayo kwezentlalo, kwaye namhlanje ibali lale ndlela yeyona ilungileyo abanokuyiqala. Awukabikho umhla wokukhutshwa kodwa nje ukuba siyazi siya kukushiya kuwe kwisithuba esitsha. Kwaye wena, Ngaba uninzi lwamaxwebhu okanye intsomi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » I-Apple tv » UApple uthenga 'uMntu oMkhulu kwiCampus' malunga nembalasane yomnyazi webasketball
Ngokukhutshwa kwe-iOS 14.5.1 Apple ukusayina i-iOS 14.4.2